I-Casita de Aguas (Intwasahlobo Etshisayo Yabucala) - I-Airbnb
I-Casita de Aguas (Intwasahlobo Etshisayo Yabucala)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguTanna
Zipholele ngoo-1930 adobe Casita kunye ne-Hot Springs yendalo i-hot Springs soaking tub yabantu ababini kwi-spa cabana enomnyango otyibilikayo ukuze ube nemfihlo okanye, xa uvuliwe ukuze ubone iNtaba yeTurtleback. Khawukhe uzipholele kwi-cabana ekwibala langaphandle labucala. Kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwindawo yedolophu enembali, apho uza kufumana iivenkile, ukutya okumnandi, kunye nendawo eyenza utywala basekuhlaleni.
Indawo yasekhitshini ine-skillet yombane, ipleyiti eshushu, imbiza yekofu, i-microwave kunye nezinto zokupheka. Uza kunikwa i-gourmet okanye ikofu yasekuhlaleni. Umphakathi we-casita ushushu yindawo yomlilo yombane. Kukho i-Netflix ye-TV enikezelweyo. Ishawa ibekwe phandle, ibe isetyenziswa nguwe wedwa. Ibhafu enamanzi ashushu ibekwe phandle, kodwa ikwindlu ye-spa evalekileyo neyabucala. Ibhafu enamanzi ashushu kufuneka igcwaliswe qho xa isetyenziswa (kuba ayiyo ibhafu enamanzi ashushu eneclorine/iikhemikhali). Imigodi eshushu idla ngokuphuma ngo-94 ukuya ku-105 ° kuxhomekeka kwixesha lonyaka nakuMama Wendalo! Sinexesha lokufudumeza elifudumezayo elifudumeza ibhafu ukuya kwiqondo lobushushu elifunwayo. Sinikezela ngemiyalelo yenyathelo ngalinye xa kubhukishwa.
4.90 · Izimvo eziyi-202
Uza kuba kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kwindawo yedolophu enembali eneevenkile zokuthenga, iigalari zobugcisa, iindawo zokutyela kunye nendawo eyenza utywala basekuhlaleni. Imyuziyam iGeronimo Springs, iVeterans Memorial Wall kunye neElephant Butte Lake ziindawo nje ezimbalwa ezibangel 'umdla.
Umbuki zindwendwe ngu- Tanna